Nei Yako Inotengeswa Yekutengesa Sarudzo iri Kutadza | Martech Zone
Muvhuro, March 11, 2013 Muvhuro, March 11, 2013 Douglas Karr
Pane muedzo neavo vedu vari inbound kushambadzira indasitiri kudzikisira kunze kwekushambadzira. Ndakatoverenga uko vamwe vashambadziri vari mukati vakati hapana chikonzero chekushambadzira kwekunze. Kutaura chokwadi, icho chigaro. Iri izano rinotyisa kune chero bhizinesi rinotarisa kuwedzera mumisika mitsva uye kubatana netarisiro dzavanoziva kuti dzichaita vatengi vakanaka.
Kana iwe uine zita rinozivikanwa (sevazhinji mabloggi uye vamiririri venhau vezvemagariro), zvingangodaro zvisina basa kutora foni nekufona kunotonhora. Izwi remuromo uye kutumira zvinogona kukwana kukubatsira iwe kukura rako bhizinesi. Icho hachisi chinhu chepamusoro chine makambani mazhinji anazvo, zvakadaro. Kuti vese vakure uye vakunde kukwezva, mazhinji emakambani anofanirwa kuisa nzira yekubuda yekubuda. Kunyangwe ipapo, kune vazhinji vanonzi vatengesi vehunyanzvi vanopa zano huwandu hwevanosangana vane tarisiro usati wavasiya.
Maitiro mazhinji anobuda ekushambadzira anokundikana nekuti ivo havashingirire mukufonera vatengi vari mukati mekiyi yavo yakasimba. Takakurukura izvi zvichaita Bill Johnson - mubatsiri-mubatanidzwa weJesubi, a kutengesa kutsvaga automation chishandiso uye anotsigira Martech.
Chikamu chechikonzero chekuti Bill akazove mutendi mukuru mukushingirira kwehunyanzvi uye nei vakavaka Jesubi inodzokera kumazuva avo ekutanga ku Aprimo. Sarudzo yakaitwa yekudaidza vatengesi anosvika makumi maviri neshanu pamusoro pegumi kusvika gumi nemaviri vhiki yekuyedza kuyedza kuvawana parunhare kuti vatyaire hurukuro. Nekuti Aprimo aive akananga zvikwata zvekushambadzira zveFortune 10 vaive nevanhu vakawanda vavakatarisa.
Izvo zvaive zvakare zvakanyanya, zvakaoma kwazvo kuwana tarisiro yekutora foni kana kudzorera voicemail. Merrill Lynch yaive pachinangwa chavo chavaive nacho 21 mazita ekutengesa kunanga… kubva kuCMO, kuenda kuVP yeKushambadzira kuenda kuna Director weInternet Kushambadzira, nezvimwe Mutungamiriri wePrivate Client Kushambadzira akazopindura foni yake pamuedzo wechi9. Aive munhu wechi18 akanangwa. Akabvuma kupihwa musangano, akachinja kuva tariro yakasimba, ndokutyaira chibvumirano chemamirioni-emadhora. Dai vakarega kufona after 6 kuedza kana kungodaidza vanhu vana isu tingadai tisina kumboita hurukuro naye.
Jesubi nguva pfupi yadarika akavhara chibvumirano Xerox. Mumiriri waBill anonzi VP Yekutengesa kagumi pane angangoita vhiki nomwe. Iye akaturika paari pane yechipiri kuyedza :). Akaenderera kufona uye pamuedzo wake wechigumi iye akatoti handisi munhu chaiye ndapota fonera SVP yeSales. Mumiriri wangu ndakamudaidza uye pakuedza kwechisere akatora foni yake akati, "Ndiri mukomana akaoma kuti ubate kuti wakazviita sei?" Mumiriri waBill akatsanangura maitiro ake uye kubatsira kwaJesubi. Xerox akakumbira demo ipapo ipapo uye masvondo mashoma gare gare Jesubi akaita 10 dhiri rekushandisa.
Hapana mumwe wemienzaniso iri pamusoro ungadai wakavhara kuburikidza nekushambadzira kuri mukati nekuti tarisiro yanga isiri kutsvaga mhinduro. Hapana kana mumwe angadai akapindura voicemail. Hapana kana mumwe angadai akaita bhizimusi nemakambani akange aine reps yaingodaidzwa ka6 chete kana mhiri kwemazita mana. Simba iri kuziva kuti zvinotora kushingirira uye kuziva kuti iko kutsungirira kunofanirwa kuve chii.
Jesubi inowedzera kugadzirwa kwekutengesa nemishumo inonzwisisika uye yekutaurisa yekutaurirana. Sevha nguva uye utengese zvakawanda ne-kamwe-tinya kufona skrini, otomatiki ekutevera-kumusoro, uye ane simba ekuzivisa maturusi.
Tags: kutonhora kudanaCRMjesubimerrill lynchkushambadzira kunzekutengesa kushandisa michinakutengesa crmkutengesa kutsvagakutengesa kutsvaga kwekushandisaxerox
Iyo Nyika Yemasocial Ads
Mar 12, 2013 pa 9: 54 AM
Kutenda sekugara Doug, kutanga kurira senge yekutengesa otomatiki mhinduro inofanirwa kuwana zvimwe kuwanikwa, uye chechipiri posvo yako yakakonzera hurukuro yakanaka nezve kutanga-kumusoro uye nharaunda yedu yemunharaunda.
Mar 12, 2013 pa 10: 22 AM
Pane poindi yekudzora kudzoka. Nevatengi veB2B vatinoshanda navo taona kuti mushure mekuedza kusere kwefoni uye voicemail kusvika, chiyero chekudzoka kana chekuita chinodonha zvakanyanya. Kutsungirira kune zvese zvakanaka uye zvakanaka kusvikira iwe wave kurwadziwa kunogumbura pambongoro, izvo zvinokuvadza maonero ekambani uye iyo mhando. Ehezve kune zvimwe zvinosiiwa uko vatengesi "varairidzi" vachazosvika pachikuva votaura pamusoro pemutengesi wepakati uyo akaita 8 kuedza uye akavandudza kutengesa kwehupenyu hwake. Ndiko kusarudzika. Kana mumwe munhu akandidaidza kagumi kana ndisina kupindura, ndave kuda kugadzirira chombo chenyukireya kubhizinesi ravo. Izvo zvakakosha kuti uzive nguva yekurasa uye kuisa iwo mahukama muchirongwa chekurera.
Mar 30, 2013 pa 5: 22 PM
Kutanga kubva, ini ndinoda kutaura parunhare. Sei? Nekuti ini ndinozviita zvisingawanzo, uye ndizvozvo nekugadzirwa. Kana ndiri kutaura kune mumwe munhu, ini ndiri kazhinji kutenga kana kutengesa chinhu. Ini ndinowana pamwe gumi nemaviri emafoni pamwedzi andiri kuda kutora - mamwe maviri kusvika kumazana matatu (ndakaongorora yedu VOIP system izvozvi) maBS andinozvidza. Zvinonzwika sekutengesa kwekutarisira otomatiki inotarisira kuwedzera iyo nhamba. Ngatitaurei pachena - izvo hazvisi kuzoratidzira zvakanaka iyo chap kune rumwe rutivi rwemutsara. Sei? Nekuti ini handitende kuti chero munhu achazondidaidza nemhinduro yandisati ndatarisa - uye kana ikabata kukosha ndakatosvika kwavari. Iyi yakavharika-pfungwa, pamusoro pechivimbo nzira ndiyo inoumba zvimwe zvehunhu hwemutengi wangu persona - Ini ndiri wekutanga adopter uyo anotenga pane kukosha uye anofarira madhijitari chiteshi - kunyangwe magariro - kutsvagisa uye kuvaka iyo mhinduro seti inotyaira bhizinesi rangu. .
Nekudaro, iyo poindi apa ndeyekuti kunyangwe hazvo kangani ini ndadaidzwa nechero system, haisi yangu nzira inosarudzika - uye kutaura chokwadi haishande, vanhu vaedza. Izvo hazvireve kuti hazvishande kune vamwe, kana zvirizvo mienzaniso iri pamusoro inoratidza kuti ichaita - zvisinei ini ndinofunga zvakare inoratidza kuti mutengi anoramba achirovedza muviri ndeyechokwadi pamusoro peiyo faneli segmentation kurovera iyo vese vatengesi vanogona kubatsirwa nayo. Sitiroko imwe haishande kune vanhu vese - uye haina kusarudzwa nemusoro wezita rebasa, saizi yekambani kana kunyange kutenga chinzvimbo - zvinoenderana nehunhu. Kunyangwe mhinduro iri kushambadza otomatiki, kana kutengesa kwekutsvaga otomatiki hapana chinotsiva kuziva wauri kutaura naye. Uye kana uchinge wawana ivo pafoni, hurukuro ichave yakafuma pane iyo.